Electricity(Electricity) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
खेर जाने बिजुलीको बजार खोज्दै विद्युत प्राधिकरण
काठमाण्डौ । गत मनसुनमा झण्डै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गयो। मूल्यमा हिसाब गर्दा खेर गएको बिजुली मात्रै रु पाँच अर्ब बराबरको थियो। केही समयपछि नेपालमा पुनः मनसुन सुरु हुँदैछ। पानी पर्ने याम सुरु भएपछि नदी तथा खोलामा जल सतह बढ्न थाल्छ। त्यसबाट सञ्चालनमा रहेका सबै जलविद्युत् आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न थाल्छन्।...
नेपालले पायो भारतलाई थप ३२५ मेगावाट बिजुली बेच्ने अनुमति
काठमाण्डौ । नेपालले भारतीय विद्युत् ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा थप ३२५ मेगावाट विद्युत् बिक्रीको अनुमति पाएको छ। भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय विद्युत् बजारमा थप ३२५ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको हो। यसअघि २०७८ कात्तिकमा पहिलो चरणमा ३९...
भारतद्वारा नेपालको बिजुली व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त, बंगलादेशमा बेच्न बाटो खुल्यो
– रमेश लम्साल काठमाण्डो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को फ्रेमवर्क र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंंगलको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को घोषणाभन्दा पनि माथि उठेर भारतले नेपालको बिजुली व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ। वर्षाको समयमा खेर जाने बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न नेपालले लामो...
अनियमित लोडसेडिङले उद्योगी मर्कामा, भन्छन्–‘विद्युत फालाफाल छ भनेर ढाँट्ने काम भयो’
– अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सात दिनदेखि पूर्वका औद्योगिक क्षेत्रहरुमा १२ घन्टादेखि १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ सुरु गरेसँगै उद्योगीहरु मर्कामा परेका छन्। विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको तालिका नदिँदा कर्मचारीहरु उद्योगमा त्यत्तिकै बस्नुपरेको र दैनिक लाखौँको घाटा भइरहेको उनीहरुको गुनासो छ। उद्योगी...
प्रतियुनिट रु. ३८ मा भारतबाट बिजुली किन्दै विद्युत प्राधिकरण, हालसम्मकै उच्च मूल्य
काठमाण्डौ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतसँग प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँमा विद्युत खरिद गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन उक्त जानकारी गराएको हो। आज रातिदेखि नै ३८ रुपैयाँमा विद्युत खरिद गर्न प्रतिस्पर्धामा भाग लिइने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतसँग हालसम्मकै उच्च मूल्यमा...
विद्युत् प्राधिकरणले आईपीओ जारी गर्न लागेको हो? के भन्छन् कुलमान घिसिङ ?
– अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ । नेपाली सेयर बजारमा विगत केही दिनदेखि एमसीसी, गठबन्धनको भविष्य, बढ्दो ब्याजदरलगायतका विषयमा बहस र चर्काचर्कीको हुँदै आएको छ। अहिले लगानीकर्ताको ध्यान भने फरक विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। त्यो हो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आईपीओ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नै १२ अर्ब १२ करोड...
इक्राबाट विद्युत प्राधिकरणले पायो उच्च मात्रामा सुरक्षित मानिने निष्कानकर्ताको रेटिङ
काठमाण्डौ । इक्रा नेपाल लिमिटेडले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ‘(इक्राएपी–आई) एए प्लस’ निष्कासनकर्ताको रेटिङ प्रदान गरेको छ। उक्त रेटिङ प्राप्त गर्ने निकायहरु समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा उच्च मात्रामा सुरक्षित मानिन्छन्। यस्ता निकायहरुमा ज्यादै न्यून क्रेडिट जोखिम रहेको हुन्छ। उक्त रेटिङ निष्कासनकर्ताको...
सडकबत्तीको बक्यौता महशुल बुझाउन स्थानीय तहलाई १५ दिनको समयसीमा, नत्र काटिने
काठमाण्डौ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय तह तथा उपभोक्ता समूहहरुलाई सडक बत्तीको बक्यौता रकम १५ दिनभित्र बुझाउन अल्टिमेटम दिएको छ। तोकिएको समयभित्र बक्यौता रकम नबुझाए विद्युत सेवा बन्द गर्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले दिएको छ। प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै स्थानीय तह (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिका)...
विद्युत प्राधिकरणले सोलारको पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने
काठमाण्डौ । नपाल विद्युत प्राधिकरणले सोलार प्लान्टबाट उत्पादित ऊर्जाको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रतिस्र्धाबाट गर्ने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सोलारको पीपीए गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरेको हो। सोलारबाट उत्पादित...
काठमाण्डौ । अब विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न घरमा छुट्टै मिटर राख्न पाइने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ मार्फत घरमै विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न छुट्टै मिटर माग गरेमा ग्राहकलाई मिटर दिने व्यवस्था मिलाएको हो। यसका साथै घरायसी प्रयोजनका लागि स्वीकृत लोडले नधानेर गाडी चार्ज गर्न नसकिएमा ग्राहकले आफ्नो...
काठमाण्डौ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अपार्टमेन्ट र कोलोनीहरुमा बसोबास गर्नेहरुलाई अन्य ग्राहकसरह विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। प्राधिकरणले तोकिएका सर्त पूरा भएमा अपार्टमेन्ट र कोलोनीहरुमा बस्नेहरुलाई अन्य ग्राहकसरह विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने भएको हो। अहिले अर्पाटमेन्टहरुले आफूले प्राधिकरणबाट विद्युत लिएर...
आजबाट विद्युत प्राधिकरणका आय काउन्टरहरु ५ दिनसम्म बन्द रहने
काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सबै आय संकलन काउन्टरहरु आज पुस १ गतेबाट ५ दिनसम्म बन्द रहने भएका छन्। प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै बिलिङ सिस्टम अद्यावधिक गर्नका लागि सबै आय संकलन काउन्टर पुस ५ गतेसम्म बन्द रहने जानकारी गराएको हो। विद्युत प्राधिकरणका उपभोक्ताको २०७८ मंसिर महिनाको खपत अर्थात् पुस १ गतेदेखिको रिडिङमा लागू...
औद्योगिक करिडोरमा मागेजति बिजुली दिन संरचना बनाउँदै विद्युत प्राधिकरण
–रमेश लम्साल हरेक युनिट बिजुलीलाई आर्थिक उत्पादनमा जोड्ने र देशभित्रै खपत बढाउने लक्ष्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले योजनावद्ध रुपमा प्रयास थालेको छ। प्रमुख औद्योगिक करिडोरमा बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राधिकरणले अगाडि सारेको योजना कार्यान्वयन भएको खण्डमा हाल निर्माणाधीन...
विद्युत प्राधिकरणको चिन्ता : बिजुलीको खपत कसरी बढाउने ?
– रमेश लम्साल काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा पछिल्लो समय २ हजार मेगावाट विद्युत् उपलब्ध छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेपछि प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन देखा पर्यो। अपेक्षित रुपमा माग भने बढ्न सकेन। यसवर्षको लक्ष्मीपूजाको दिनको साँझको विवरण हेर्दा १ हजार २७० मे�...